Mashoko Akanaka Akanyorwa naMateu 2:1-23
2 Pashure pekunge Jesu aberekwa muBhetrehema+ reJudhiya mumazuva aMambo Herodhi,*+ vazivi venyeredzi vekuMabvazuva vakabva vasvika kuJerusarema, 2 vachiti: “Aripiko iye akaberekwa ari mambo wevaJudha?+ Nekuti takaona nyeredzi yake patakanga tiri kuMabvazuva, uye tauya kuzomupfugamira.” 3 Achinzwa izvi, Mambo Herodhi akashushikana, pamwe chete neJerusarema rese. 4 Akaunganidza vatungamiriri vevapristi vese nevanyori vevanhu, ndokuvabvunza kwaizoberekerwa Kristu.* 5 Vakati kwaari: “KuBhetrehema+ reJudhiya, nekuti izvi ndizvo zvakanyorwa nemuprofita kuti: 6 ‘Uye iwe, Bhetrehema iri munyika yeJudha, haufaniri kuonekwa seguta risingakoshi pane vamwe vatungamiriri veJudha, nekuti mauri muchabuda mutungamiriri, achafudza vanhu vangu vaIsraeri.’”+ 7 Herodhi akabva ashevedza vazivi venyeredzi pachivande, akanyatsobata chokwadi kwavari kuti nyeredzi yakanga yaonekwa nguvai. 8 Paakavatuma kuBhetrehema, akati: “Endai munonyatsotsvaga mwana wacho, uye kana mamuwana mudzoke, mundiudze kuitira kuti neniwo ndiende ndinomupfugamira.” 9 Pavakanga vaudzwa izvi namambo, vakaenda, uye nyeredzi yavakanga vaona pavakanga vari kuMabvazuva+ yakabva yatanga kuvatungamirira, kusvikira yamira pamusoro penzvimbo yaiva nemwana wacho. 10 Pavakaona nyeredzi yacho, vakafara zvekufara zviya. 11 Uye pavakapinda mumba, vakaona mwana wacho aina amai vake Mariya, uye vakakotama vakamupfugamira. Vakasunungurawo pfuma yavo vakamupa zvipo zvinoti, goridhe, zvinonhuhwirira zvichena, nemura. 12 Asi vakadzokera kunyika yavo neimwe nzira, nekuti vakanga vanyeverwa naMwari kuhope+ kuti varege kudzokera kuna Herodhi. 13 Pashure pekunge vaenda, ngirozi yaJehovha* yakabva yazviratidza kuna Josefa kuhope,+ ichiti: “Simuka, tora mwana naamai vake utizire kuIjipiti, ugare ikoko kusvikira ndakuudza kuti udzoke, nekuti Herodhi ava kuda kutsvaga mwana kuti amuuraye.” 14 Saka Josefa akasimuka, akatora mwana wacho pamwe chete naamai vake usiku, akaenda kuIjipiti. 15 Akagara ikoko kusvikira Herodhi afa. Izvi zvakazadzisa zvakanga zvataurwa naJehovha* achishandisa muprofita wake, achiti: “Ndakashevedza mwanakomana wangu kuti abude muIjipiti.”+ 16 Herodhi paakaona kuti akanga anyengerwa nevazivi venyeredzi, akabva ashatirwa kwazvo, akatuma vanhu, akaita kuti vana vakomana vese vaiva muBhetrehema nemumaruwa aro ese vaurayiwe, kubvira pazera remakore maviri zvichidzika, maererano nenguva yaakanga abvunza vazivi venyeredzi.+ 17 Izvi zvakabva zvazadzisa zvakataurwa nekumuprofita Jeremiya paakati: 18 “Inzwi rakanzwika muRama, kuchema nekuridza mhere kukuru. NdiRakeri+ aichema vana vake, uye airamba kunyaradzwa, nekuti vakanga vasisipo.”+ 19 Pakafa Herodhi, ngirozi yaJehovha* yakabva yazviratidza kuna Josefa kuhope+ muIjipiti, 20 ikati: “Simuka, tora mwana naamai vake, uende kunyika yeIsraeri, nekuti vaya vaitsvaga kuuraya mwana* vakafa.” 21 Saka akasimuka, akatora mwana wacho naamai vake, akapinda munyika yeIsraeri. 22 Asi paakanzwa kuti Akerausi ndiye akanga ava kutonga Judhiya panzvimbo pababa vake Herodhi, akatya kuenda ikoko. Uyewo sezvo Mwari akanga amunyevera kuhope,+ akaenda kunharaunda yeGarireya.+ 23 Uye akasvika, akagara muguta rinonzi Nazareta,+ kuti zvakataurwa nekuvaprofita zvizadziswe, zvekuti: “Achanzi muNazareta.”*+
^ Kana kuti “Mesiya; Muzodziwa.”
^ Kana kuti “vaitsvaga mweya wemwana.”
^ Rinogona kunge rakabva pashoko rechiHebheru rinoreva “nhungirwa.”